တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ ယူနနျပွညျနယျပါတီကျောမတီ၊ အတှငျးရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao အား ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ၌လကျခံတှဆေုံ့သညျ။